​‘मान्छे कहिले नमर्ने भए’ के हुन्थ्यो ?::Online News Portal from State No. 4
​‘मान्छे कहिले नमर्ने भए’ के हुन्थ्यो ?
बागलुङ, ९ असोज – नेपाली गायन क्षेत्रमा अर्का प्रतिभाशाली बालगायकको उदय भएको छ । उमेरले ८ वर्षका जेनिश उप्रेती निकै राम्रो गाउँछन् । उनले गाएको ‘मान्छे कहिले नमर्ने भए’ बोलको गीत तथा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । झापा बिर्तामोडका जेनिश कुनैपनि गीत एकपटक सुनेपछि सजिलै गाउँ सक्छन । जेनिश काठमाडौंमा गीत रेकर्डिङका लागि आउँदा मिडियाले उनलाई पिछा गरेका थिए । एक दर्जनभन्दा बढी युटुब च्यानलले उनको अन्तर्वार्ता पनि लिए । जहाँ उनको प्रतिभा हेर्न सकिन्छ ।
जेनिशको समधुर आवाजमा रहेको ‘मान्छे कहिले नमर्ने भए’ बोल गीतको म्युजिक भिडियो हालै रिलिज भएको हो । मोफसलका चर्चित निर्देशक राज चाम्लिङको शब्द र संगीतमा तयार भएको उक्त गीतलाई थोमस राईले एरेञ्ज गरेका हुन् । उक्त गीतको भिडियोमा सुप्रिया कटवाल र बाबु मोक्तानले अभिनय गरेका छन् । यस भिडियोलाई भगिराज राईले निर्देशन गरेका हुन् ।
संसारबाट बिदा लिदा पनि क्यामेरा अगाडि होस्-निरुता सिंह
‘साइँली’को पोस्टर सार्वजनिक, प्रदर्शन मिति कहिले ?
मोडल तथा गायिका श्रीषा कुँवर